Volleyball & Sepak Takraw Sport Activities
Volleyball isapopular team sport in which two teams of six players are separated byanet. Each team has three hits to attempt to return the ball. Sepak Takraw is similar to volleyball, but is played withawoven rattan ball - and without using the hands. Myanmar Yang Tse Copper Limited plays these sport competitions in order to enhance good wellbeing and to developahealthy team spirit.
72nd Independence Day Sport Celebration
In honor of 72nd anniversary of Independence Day, MYTCL held their annual sports and entertainment with traditional dance for the staff and Mine Town families in commemoration of this festive day. The Sport Festival was held at the Mine Town Sports ground on 18th January, 2020.
မြန်မာယန်စီ အနီးတဝိုက်တွင်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများ နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများသည် IBC ရေပုံးများ ၊ ထင်းများ၊ဓာတ်ဆီ စသဖြင့် မြန်မာယန်စီသို့ တောင်းဆိုလျက်ရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများသည် IBC ရေပုံးများကို များသောအားဖြင့် ရေများသိုလှောင်ရန်အတွက် တောင်းဆိုလေ့ရှိပါသည်။ မြန်မာယန်စီ မှ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းနှင့် သာသနာရေးလှူဒါန်းမှုများအတွက် နှစ်စဉ် CSR ဘက်ဂျက်အပြင် လှူဒါန်းမှု့ အသေးစားများပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
လူတိုင်းသက်ရှည်ကျန်းမာရန်အတွက် အားကစားပြုလုပ်ခြင်းသည် အရေးပါသော ကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ရွာသာကျေးရွာသည် မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမီတက်အနီးတွင် တည်ရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။